Puntland oo digniin u dirtay dadka maandooriyaha ka ganacsada | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Puntland oo digniin u dirtay dadka maandooriyaha ka ganacsada
Puntland oo digniin u dirtay dadka maandooriyaha ka ganacsada
Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Bari Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud oo kormeer amni u tegay Saldhigyada ciidamada Booliska Magaalooyinka Carmo & Ceeldaahir ayaa digniin u diray dadka isticmaala & kuwa ka Ganacada waxyaabaha maandooriya oo Khamriga ka mid yahay.
Waxaa uu sheegay Taliyuhu inay jiraan dad Magaalooyinka kala duwan ee Puntland Khamriga kasoo geliya islamarkana Magaalada Carmo keena, waxaana uu sheegay in dadkaasi loo baahan yahay inay joojiyaan.
Ugu dambeyn Taliye Cali oo kulamo looga hadlayay amniga la qaatay saraakiisha Booliska Magaalooyinka Carmo & Ceeldaahir ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono kuwa isticmaala & kuwa ka Ganacsada waxyaabaha maanka dooriya.
Puntland ayaa dhowr jeer waxaa ay howlgallo ku qabatay Gaadiid siday waxyaabaha maanka dooriya, kuwaas oo Goobo fagaarayaal ah lagu gubay, sidoo kalena dad loo maxkamadeeyay.
Previous articleWasiirka warfaafinta Soomaaliya oo ka tacsiyadeeyay geerida Fanaan Shamuuri